जेठाजुले आफ्नै बुहारी भगाएपछि…, भाई रुँ-दै मिडियामा आए (भिडियो सहित)
Homeसमाचारजेठाजुले आफ्नै बुहारी भगाएपछि…, भाई रुँ-दै मिडियामा आए (भिडियो सहित)
April 8, 2021 admin समाचार 5893
नेपालमा आजकल हरेक दिन न’राम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह त्या कहिले आ त्म’ ह त्या कहिले चोरी त कहिले लु ट ‘पाट । संकटकाल सकि’एपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही नसो’चेको घ’टना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दुखी बनाउदै आएको छ ।
झापामा फेरि अर्को सोच्नै नस’किने घि’नला’ग्दो घटना घटेको छ । श्रीमान १५ दिन कतै काम गर्न जादा एक परिवारमा जेठा’जुले बुहारी भगाएका छन्। धर्म चाहार नाम गरेका पि’डित युवा मिडियामा आएर आफ्नो श्रीमती दाइले भगाएको भन्दै आफ्नो गु’ना’सो पोखेका छन् ।
क’ र णी गरेको आ’ रो प मा ८ बर्ष जे’ल बसेर आएका माइला दाजुले आफ्नी श्रीमती लिएर १४ दिन अगाडी बाट बेप’त्ता भएको जनाएका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयमा उ’जुरी दिएका छन् तर अहिले सम्म उनकी श्रीमती र दाइ फेला न’परेपछि उनि मिडि’यामा आएका हुन् ।आखि के हो त वा’स्तविक घ’टना ? तल भिडियोमा सबै जान’कारी हेर्नुहोला । इताजा खबरबाट
खुशीको खबर, अब नेपाली विद्यार्थी दक्षिण कोरिया स’जिलै जान पाउने
काफल पाकेसँगै किन कराउँछ ? ‘काफल पाक्यो चरी’ हे’र्नुहोस्
January 25, 2021 admin समाचार 7265
न्युजील्यान्डको एक भेडा फा’र्मबाट भागेर ६ वर्ष सम्म पहाडमा लुकेको एक भेडाको शरीरमा २७ किलो ऊन उ’म्रेको छ । फार्ममा हुँदा उसको शरीर बाट ऊन निय’मित रूपमा काढि’ने गरेको थियो तर पहाडमा ऊन बढ्दै गयो
November 20, 2020 admin समाचार 9128
January 2, 2021 admin समाचार 8749